Voaroaka ny mponin'i Cape Town raha nirehitra ny afon-tsambo tao Mountain Mountain
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao farany momba an'i Afrika Atsimo » Voaroaka ny mponin'i Cape Town raha nirehitra ny afon-tsambo tao Mountain Mountain
Birao fizahantany afrikanina • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao • tompon'andraikitra • Safety • Vaovao farany momba an'i Afrika Atsimo • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Namoaka fanambarana ny ivon-toerana fitantanana ny risika loza any Cape Town, nilaza tamin'ny mponina ao an-tanàna mba ho mailo
Mpamono afo sy mpiasan'ny vonjy maika 250 no nalefa tany amin'ny oniversite campus sy tao amin'ny Mountain Mountain National Park
Helikoptera efatra no nampiasaina handatsahana rano tany amin'ireo faritra norahonana
Ny firehetana tsy voafehy dia namorona ny rivony manokana izay vao mainka nampitombo ny tahan'ny fielezana
Nodorana ny tranomboky manan-tantara ao amin'ny University of Cape Town ary mpianatra 4,000 teo ho eo no nafindra toerana rehefa nisy afo nirehitra teny amin'ny tehezan'i Cape Town's Table Mountain niitatra tany amin'ny campus.
Raha nanapoaka siny rano ny mpamono afo mba hamonoana ny afo, farafahakeliny rihana roa ao amin'ny Jagger Library izay misy trano firaketana sy fanangonana boky may.
Nirehitra ihany koa ny tranobe iray hafa tao amin'ny campus, ary nisy vangin-drivotra manan-tantara nanodidina azy.
Ny mpamono afo sy ny mpiasan'ny vonjy maika 250 dia nalefa tany amin'ny oniversite sy tao amin'ny Mountain Mountain National Park. Helikoptera efatra no nampiasaina handatsahana rano tany amin'ny faritra norahonana, hoy ny tompon'andraikitra ao Cape Town.
Namoaka fanambarana ny ivon-toerana fitantanana ny risika loza any Cape Town, nilaza tamin'ny mponina ao an-tanàna mba ho mailo.
Ny sampana vonjy taitra dia nanala ireo mponina sasany tao ambanivohitra avaratry ny Vredehoek, manamorona ny tehezan'i Mountain Mountain.
Trano fonenana 17 rihana manatrika an'i Cape Town no nesorina satria may be dia be ny afo, izay natopin'ny rivotra mahery.
Ny afo tsy voafehy dia namorona ny rivony manokana izay vao mainka nampitombo ny tahan'ny fielezana, hoy izy nanampy, nanombatombana fa mila telo andro farafahakeliny ny mpamono afo hifehy ny afo.